Ụzọ nke ìhè anyanwụ, ìhè anyanwụ na-enwu enwu, ìhè anyanwụ nke larịị nke anyanwụ si China
Nkọwa:Mbara Igwe Ochie,Mbara Igwe Na-eme Ka Elu,Okpokoro Osimiri Na-acha Ncha,Egwuregwu n'èzí,,
Mbara Igwe Ochie,Mbara Igwe Na-eme Ka Elu,Okpokoro Osimiri Na-acha Ncha,Egwuregwu n'èzí,,
Home > Ngwaahịa > Ìhè anyanwụ > Mbara Igwe Ochie
Ngwaahịa nke Mbara Igwe Ochie , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Mbara Igwe Ochie , Mbara Igwe Na-eme Ka Elu suppliers / factory, wholesale high-quality products of Okpokoro Osimiri Na-acha Ncha R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
China Mbara Igwe Ochie Ngwa
Ike anyanwụ bụ ihe na-adịghị agwụ agwụ, dị ọcha, nke na-adịghị emerụ emerụ ma na-agbanwe agbanwe. A na - ewere ike ume foto dị ka ike ọhụrụ kachasị mkpa na narị afọ nke 21 n'ihi uru ya dị ka ịdị ọcha na-enweghị atụ, nchebe dị elu, ịdị ogologo nke ịdị adị na ike nke ume, ogologo oge na nduzi n'efu. Enweghị ike ịnye ọkụ ọkụ n'okporo ámá anyanwụ , ọ dịghị mkpa inwe ike, enyeghị ọkụ eletrik. Dc ike ọkọnọ na njikwa; Ọ nwere uru nke nkwụsi ike dị mma, ndụ ogologo, arụmọrụ dị elu, ntinye na ntinye dị mfe, arụmọrụ dị elu, nchedo ike na nchekwa gburugburu ebe obibi, aku na uba na ihe bara uru. A pụrụ iji ya mee ihe na obodo ukwu na ụzọ ndị ọzọ, obere ebe, ụlọ ọrụ, ebe nkiri nlegharị anya, ebe ndị na-adọba ụgbọala na ebe ndị ọzọ. Oghere uhie n'okporo ámá na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nkwụnye ume, ịkwụsị ego, ogologo oge ndụ, usoro ihe eji eme ihe, ma nwee ezigbo uru mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Okpokoro Osimiri Na-acha Ncha